China Khetha ilungelo ukudla ezemidlalo; Ungadlali imiphumela umsebenzi wakho! Umkhiqizi kanye Umthengisi | Bracefactory
NGENHLA esitho umkaki
EZINCANE esitho umkaki
Kumatilasi & ezihlalweni
UKUNAKEKELWA ONYAWENI abicah
Khetha ilungelo ukudla ezemidlalo; Ungadlali imiphumela umsebenzi wakho!
Nutrition Izithako ngaphambi nangemva umzimba nje kubalulekile njengoba umsebenzi uqobo. Uma ungafuni ukusebenzisa amaprotheni powder le ibhekwa njengengxenye yokudla okunempilo kuphela njengoba, yini ukudla engasisiza sithuthukise ukusebenza ngokomzimba ngesikhathi umsebenzi futhi ubuyisele amandla ngemva kokuzivivinya?
Okunomsoco Australian Zoe Bingley-Pullin wathi carbohydrate kukhona liwumthombo ongcono kunayo yonke namandla Izithako ngaphambi umsebenzi, futhi asanda isibambo ijusi noma wonke-kakolweni crackers nazo izinqumo ezinhle. Ngemva kokuzilolonga, yokudla imifino impande ezifana izaqathe kanye ubhatata DO ukusiza ukubuyisela amandla.
Okunomsoco Australian Zoe Bentley-Pullin ukuthi ukukhetha ukudla kuncike hlobo umsebenzi. Uma ukuya ejimini, kubalulekile ukuba udle into ngaphambili. Eposini blog, Zoe wathi carbohydrate kukhona liwumthombo ongcono kunayo yonke namandla Izithako ngaphambi umsebenzi, ukuhlinzeka amandla adingekayo ukuze umsebenzi.
Munye nobe mibili izingcezu izithelo, inkomishi ikota izithelo okuxubile ezomile noma inkomishi asanda-isibambo ijusi yezithelo & yemifino kungasiza ubuyise amandla. Ngaphezu kwalokho, uma uhlela ukwenza ephezulu amandla ezemidlalo ezifana weightlifting, esisodwa noma ezimbili izingcezu lonke-okusanhlamvu crackers, irayisi amakhekhe camera nge nut ibhotela noma ricotta kungasiza sifinyelele ukuqina kangcono.
Ngokufanayo, ukudla ngakwesokudla ngemva ukuzivocavoca isihluthulelo ekubuyiseleni amandla. Ochwepheshe basikisela ukuthi imizuzu 30-60 emva umsebenzi yisikhathi esingcono ubuyise amandla. Zoe ukuthi ngemva kokuzivivinya, kuba ezifanele ukuba udle ukudla okunothile carbohydrate kanye amaprotheni.
Uma ungenalo nesikhathi esanele sokuzilungiselela ukudla, ukudla okululana esheshayo kungaba ukukhetha okuhle, ezifana nut wokudla nemishayo, izithelo nemifino okunyakazisa noma kakhulu wamaprotheni amaningi yogurt ngezithelo okuxubile omisiwe. Ngaphezu kwalokho, izaqathe, ubhatata kanye nezinye imifino impande plus hummus noma ricotta, noma iqanda abilisiwe crackers ambalwa noma irayisi amakhekhe kungaba nomphumela ofanayo.
Engeza: F8, Bldg 1 Anchi Road, Jiading 201805, Shanghai
Indlela yokubhekana ukwenyela iqakala amalunga omzimba?
Khetha ilungelo ukudla ezemidlalo; musa kwakuqala ...
Ingabe ashona kumelwe ngemva iqakala Joint bhinyila?
Four Amaphuzu asemqoka okunikeza yokuhamba Kalula ngaphandle ...
iqakala Brace , Ezemidlalo Ubuhlangano Brace , nokunwebeka Brace, Ubuhlangano Nokunwebeka sleeve se, lumbar emuva ukweseka, Ubuhlangano nokunwebeka,